Dowlada Itoobiya Oo Dalkeeda Ka Ceeyrineysa Saraakiisha Ugu Saraysay Qaramada Midoobay
September 30, 2021 F.G 0
Dowlada Itoobiya ayaa sheegtay in ay dalkeeda ka eryi doonto toddobo sarkaal oo sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay Kuwaasi Oo faragelin ku sameeyaan arrimaheeda, tallaabadan ayaa timid kadib markii shaqaalaha gargaarka ay ka dhawaajiyeen qaylo-dhaan ku saabsan helitaanka gargaarka bani’aadamnimada ee Tigray-ga oo colaadduhu halakeysay. Wasaaradda arrimaha dibedda ayaa sheegtay inay “ku dhawaaqday toddoba qof oo u shaqeeya hay’adaha aan dawliga ahayn ee kala duwan ku waas oo farageliyey arrimaha gudaha ee dalka.” “Sida ku cad warqadaha loo diray mid kasta oo ka mid ah 7 -da qof ee hoos ku taxan, waa inay dhammaantood ka baxaan dhulka Itoobiya 72 -ka saacadood ee soo socda,” ayuu ku yiri boggiisa Facebook. Bayaanka ayaa lagu magacaabay 7 sarkaal oo u shaqeeya hay’ado kala duwan oo Qaramada Midoobay ah. Gobolka Tigreega ee woqooyiga Itoobiya ayaa waxaa ka taagnaa colaad tan iyo bishii November. Qaramada Midoobay ayaa horay u qiyaastay in 400,000 oo qof ay halkaas ku wajahayaan xaalado macluul oo kale ah, taas oo sare u qaadday cabsida laga qabo in ay gaajo u dhintaan.
R/Wasare Rooble Iyo James Swan oo socod dheer ku maray xeebta garoonka Aadan cadde
R/Wasaaraha Somalia Maxamed Xuseen Rooble oo ay la socdeen masuuliyiin uu ka mid yahay wakiilka QM ee Somalia James Swan ayaa galabta socod ku maray xeebaha badweynta India ee garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka xukuumada Somalia Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in socod madaxda uu ahaa mid majo baxsi ah oo laga lahaa labo ujeedo. “R/ Wasaare Rooble iyo Ergeyga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya James Swan ayaa galabta socod minjo baxsi ah waqti dheer ku Lugeeyay Xeebta Xalane, Ujeedka koowaad waxa uu ahaa guushii dhamaystirka Aqalka Sare ee Somaliland oo maanta soo idlaatay” ayuu yiri Macalimu. Afhayeenka ayaa intaas ku daray in socodkan uu ahaa mid loogu diyaar garoobayo doorashada xubnaha golaha shacabka oo dhowaan bilaabaneysa, maadaama ay heer dhamaad ah mareyso doorashadii aqalka sare. “Ra’iisul Wasaaraha oo hogaaminaya doorashada dalka ayaa u sii alamiinteynaya hirgalinta doorashada Gollaha Shacabka oo Eebe idinkii uu rajeynayo inuu nabad ku soo gabagaboobo inshallah. Waxana isaga oo Allah talo saaranaya uu la kashanayaa Gollaha Wadatashiga Qaran, Musharaxiinta iyo Guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri afhayeenka.
Dagaal dhexmaray Ciidanka Maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlusunna
Dagaal kooban oo u dhexeeyay Ciidamada Ahlusunna Waljamaaca iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa maanta ka dhacday degaanka Bohol oo waqooyi ka xigta Magaalada Dhuusamareb ee Gobolka Galgaduud. Xog ay heshay Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegeysa in ciidamada ay weli halkaas isku horfadhiyaan deegaanka Bohol, isla markaana ay xiisadda kacsan tahay. Arrintan ayaa imaneysa ayada oo warar ay sheegayaan in ciidamada Ahlusunna ay toddobaadyadii tegay dib isugu urursanayeen deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud. Hoggaamiyayaasha Ahlusunna Macallin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir ayaa toddobaad kahor dib ugu laabtay gobolka kadib in ka badan sanad iyo bar oo ay ka maqanaayeen, taasi oo ka dambeysay markii looga adkaaday dagaal ka dhacay Dhuusomareeb. Saraakiisha sare ee ururka Ahlusunna ayaa 29-kii Febraayo 2020 isu dhiibay ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kadib markii uu dagaal dhex-maray maleeshiyaadka Ahlu Sunna iyo ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna kadib isaga baxeen gobolka. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah mas’uuliyiinta sare ee Ahlusunna ayaa xilligaas sheegay in malayshiyaadkooda iyo hubkoodiiba ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya [Sii aqri]
Ra’iisul Wasaare Rooble Oo Hambalyo U Direy 5ta Senator Ee Maanta Lagu Doortay Muqdisho
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa hambalyo u diray Senatorada maanta la doortay ee Aqalka Sare ee BFS ku matalaya Somaliland. 1. Saciid Cabdi Xasan. 2. Naciimo Xasan Xaaji 3. Axmed Maxamed Saciid 4. Axmed Ibraahim Maxamed 5. Deeqa Xasan Xuseen Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay inuu ku faraxsanahay in doorashadii Aqalka Sare ee Gobollada Waqooyi ku soo idlaatay guul. Waxaan hambalyo iyo ammaan u jeedinayaa ergooyinkii wax doortay iyo guddiyada doorashada ee sida hufan ee xilkasnimada leh doorashada u maamulay.
Golaha Wasiirada Puntland oo Maanta Ansixiyay xeer wax laga bedelay
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa Shir-guddoomiyay Shirka todobaadlaha ah ee Golaha Wasiirada Maamulka Puntland, kaasi oo Maanta ka dhacay Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal. Shirka oo uu ka qeybgalay Madaxweyne Ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa looga hadlay amniga, ansixinta Siyaasadda Biyaha Puntland, ansixinta wax ka bedel lagu sameeyay Xeerka Rugta Ganacsiga, Warshadaha iyo Maalgashiga, Xeerka Caanaha, dib-u-habeynta iyo dayactirka Waddooyinka Puntland iyo xaaladda degmooyinka Puntland. Golaha Wasiirada ayaa dood dheer kadib ansixiyey Siyaasadda Biyaha Puntland iyo wax ka bedel lagu sameeyay Xeerka Rugta Ganacsiga, Warshadaha iyo Maalgashiga. Sidoo kale inta uu socday Shirka Golaha ayaa waxaa Golaha loo qeybiyay xeerka Caanaha Puntland oo ay mudaneyaashu soo akhrin doonaan. Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa boggaadiyay adeega dadweynaha loo hayo iyo sidii loo sii horumarin lahaa, wuxuuna Madaxweynuhu la wadaagay Golaha Wasiirada in la dhiirigeliyo ganacsatada yaryar.
Shacabka Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Oo U Dareerey Goobaha Codbixinta
Shacabka ku nool Dowlad Deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya ayaa maanta u dareeray goobaha codeynta si ay codadkooda uga dhiibtaan doorashada guud ee dalka Itoobiya. Doorashadan oo hore loo qorsheeyay inay dhacdo ayaa waxaa qaadacay ururka ONLF oo ka mid ah ururada ka jira dalka Itoobiya. Dadka ayaa waxa ay dooranayaan wakiillada golaha deegaanka iyo xildhibaannada deegaankaasi ku matalaya baarlamaanka federaalka ee Itoobiya. Doorashadan ayaa ah tii ugu horeysay ee ka dhacda Deegaanka Soomaalida Itoobiya tan iyo markii uu xukunka qabsaday Abiy Ahmed. Bartamihii sanadkan ayaa waxaa si aqlabiyad leh ugu guuleystey doorashadii ka dhacday dalka Itoobiya xisbiga uu hogaamiyo Ra’isul Wasare Abiy Ahmed.
Ruushka “Waan Xadidi Doonaa Canalka YouTube Ka “
September 29, 2021 F.G 0
Kormeeraha warbaahinta Ruushka Roskomnadzor ayaa Arbacadii ku hanjabay inuu xaddidi doono gelitaanka YouTube-ka ka dib markii madal-wadaagista fiidiyowga ay xannibtay laba kanaal oo ku hadla afka Jarmalka idaacadda dawladda ee RT. Tallaabadan ayaa imaanaysa iyada oo ay sii kordheyso is -qabqabsiga u dhexeeya shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda shisheeye iyo Kremlin -ka iyada oo Ruushku uu raadinayo koontarool ballaaran oo ku saabsan waxyaabaha laga heli karo internetka ee dhagaystayaasheeda gudaha. Madal wadaagista fiidiyowga Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta Jarmalka Talaadadii inay digniin u dirtay RT oo ku xadgudubtay tilmaamaheeda faafitaanka coronavirus ka dibna xiray laba kanaal oo ku xadgudbay shuruudaha adeegsadaha. Roskomnadzor wuxuu sheegay inuu warqad u diray milkiilaha YouTube -ka Google “isagoo dalbanaya in dhammaan xannibaadaha” labada kanaal, RT DE iyo Der Fehlende Part, kor loo qaado “sida ugu dhaqsaha badan.” Wuxuu intaas ku daray in xayiraadaha “ay ku xad gudbayaan mabaadii’da muhiimka ah ee faafinta xorta ah ee macluumaadka” ayna tahay “fal faafreeb ka dhan ah warbaahinta Ruushka.” Roskomandzor wuxuu sheegay in YouTube ay heli karto digniin “sharciguna wuxuu siinayaa tillaabooyin wadarta guud ama [Sii aqri]
James Swan Oo Ku Baaqay In Si Degdeg Ah Loo Dhamaystiro Senatarada Aqalka Sare
Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay James Swan ayaa maanta gaaray goobta ay ka socotay doorashada Senatarada Aqalka Sare ee laga soo dooranayay gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya.Booqashada James Swan ayaa ahayd mid uu garab istaag ugu muujinayay dowlada federalka sida ay marwalba u garab taagan yihiin. James Swan ayaa ugu baaqay Guddiyada Hirgelinta Doorashooyinka Dowlad Goboleedyada in ay si degdeg ah u dhammaystiraan doorashooyinka Aqalka Sare si diiradda loo saaro doorashada Golaha Shacabka. Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Jubbaland ayaa xubno ay u dhiman yihiin, marka laga reebo xubnaha shanta ah Aqalka Sare ee Somaliland oo la filayo in berri la soo dhameystiro.
Deg Deg Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar Oo Loo Doortay Senatar Aqalka Sare
Prof Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa loo doortay Senatar Aqalka Sare kadib markii uu tartan adag oo kursiga saddexaad ah uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Wareeggii labaad ayuu Cabdi IsmaaciiL Samatar Samatar oo ah Aqoonyahan caan ah waxa uu helay 25 cod halka Profoserkii la tartayay Maxamed Maxamuud Allabari uu ka helay 21 cod. Waxaa weli ka sii socda magaalada Muqdisho doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta Aqalka Sare ee gobolada waqooyi ee dalka.
Militariga Mareykanka Oo Qirtay in Dagaalkii Afghanistan uu Ahaa Qorshe Guuldarreystay
Labaatan sano oo dhiig iyo hanti Mareykan ah oo lagu kharash gareeyay Afghanistan kaddib ayaa Talaadadii Aqalka Senate-ka wuxuu muddo lix saacadood ah su’aalo ka weydiiyay saraakiisha ugu sarreysa ciidanka Mareykanka, iyaga oo qiray in dagaalkaas uu ahaa ‘guuldarr istiraaji ah.” “Waxay ahayd guul xagga saadka ah, laakiin waa guuldarro istiraatiiji ah, oo ay dhici kartay in aan ugu dambeyntiina lagu guuleysan.” ayuu yiri taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ahna sarkaalka ugu darajada sarreeya militariga Mareykanka General Mark Milley. Wuxuu sharci-dajiyeyaasha u sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ee ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Kabul laga daadgureeyay 124,000 oo qof, oo ay ku jiraan ilaa 6,000 oo Maraykan ah. “Natiijooyinka ka soo baxa dagaal noocan oo kale ah, waa natiijo guuldaro istiraatiiji ah – cadowga ayaa hada mas’uula Kabul; ma jirto si kale oo lagu sifeeyn karo arrinkan – natiijadaasi waxay ka timid natiijooyin 20 sano is biirsaday, ma aha 20 maalmood,” ayuu General Milley sii raaciyay. Iyadoo su’aalo adag laga weydiinayay in Washington ay si kale u maareyn kartay howlgalkan si looga hortago [Sii aqri]